7-xeelad oo Ninku ku kordhin karo Awooddiisa Raganimo ee Galmada (Talo muhiima) +VIDEO - iftineducation.com
7-xeelad oo Ninku ku kordhin karo Awooddiisa Raganimo ee Galmada (Talo muhiima) +VIDEO
iftineducation.com – Weligaa ma dareentay ceeb iyo yaxyax, marka aad tagtay sariirta, qancin la’aanta xaaskaada awgeed.?
Weligaa gaarigu makaaga damey meel geeri go’an cidlo ah adigoon gaarin hoygaadii?
Weliga ma istiri oo niyaddaada ma u sheegtay waad jirrantahaye bal is dawee.?
Haddaba haddii su’aalaha kor ku xusan jawaabaha aad ka bixisay ay HAA u badan yihiin, warbixinta iyo talooyinka hoos ku qoran sii akhriso.
Xusuuso oo qalbiga ku haay xubin taran oo adag oo xooggani waa waxa ay dumarku jecel yihiin (baahi badanna u qabaan) marka aad howsha galmada ee macaan guda jirtid.
Sidaas awgeed toddobadaan talo ee Shabakada Maalinle24.com ku siineyso ayaa kaa caawinaya sidii geedkaadu u noqon lahaa garruun oo kale (geed adag)
7-siyaabood oo Ninku ku kordhin karo awooddiisa Raganimo ee galmada (Talo muhiima)
1. Si wanaagsan wax u cun
Is bedel yar oo ku yimaada nafaqadaada waxa uu kuu abuuri karaa himad iyo iyo xoog dheeri ah, cuntada sida mooska, ukunta, looska, basasha, iyo caanaha waxay siyaadiyaan awooddaada galmo.
2. Geedkaagu wuxuu rabaa jimicsi:
Ragga caafimaadka qabaahi mar walba waa ku xariif dhanka galmadda, jimicsigu waa habka ugu wanaagsasan ee aad kor ugu qaadi kartid kartidaada sariirta, waxa ay yareysaa fakarka oo ah dilaaga kacsiga, waxay kaloo caawisaa dheecaan ay soo daayaan xiniinyuhu kuwaas oo taabbo galiya habka darreenka ragga,
3. Ka fogow cabista sigaarka:
Sigaarku runtii waxa wax yeelo aan naxariis lahayn ayuu u gaystaa habdhiskaaga raganimada ama qaabkaaga dareenka waxaana uu dhimaa oo uu ladagaalamaa saameyn weyna ku reebaa rabidaada galmada,. KA FOGOW SIGAARKA HADDAAD RABTID NOLOL RAAXO LEH IYO CAAFIMAAD TAAM AH.
4. Ha siigeysan!!!!
Siigada ama caadada sirta ahi waa iska soo matajinta biyaha adigoon u galmoonin haweeney, ficilkan oo ah ficil muxuram ku ah xaga shareecada islaamka ayaa laga yaabaa in ay rag badani adeegsadaan si ay u farxad galiyaan naftooda, isla markaana iskaga saaraan kulaylka biyaha ama shahwada, sidaa darteed badashada biyaha badan ee kaa baxa iyo kacinta xubinta tarankaaga waxa ay beeri kartaa waayidda ama yaraanta kacsigaaga.
5. Baro qaabka loogu tago qoftaada:
Mar walba ku bilow baashaalin iyo istiimin ha iskaga boodin sida Orgi ama Dibi, waayo galmadu waa naxariis iyo xeeladeysi ee ma ahan xoogsasho iyo shahwo iska tuuris, la sheekayso afka kaga hadal waxaaad samayn rabtid, ha u ogolaan qoftaada in ay kaa kor marto marka ugu horeysaba.
6. Ha ku seexan dharka aadka ugu dhagan xubinta iyo xiniinyaha:
Ha xiran dharka kugu dhegen marka aad seexanaysid ama aad safar dheer galaysid
mar walba ku seexo dhar jilicsan.
7. Bar qoftaada sida loo kasbado kacsiga:
qodobkaan Xiiso Online adiga ayey kuu dhaaftay ee haddaad xariif tahay xeeladayso, oo xuural ceyntaada gaarsii heer ay macalimad ku noqoto kasbashada iyo kalsoonida dhexdeeni ah ee kacsiga.
Ragga waa ka helaan naagaha naaska nuucaan ah leh-Video kacsi ku galinaya
DAAWO”’fadeexo:-Masuul Iska Soo duubay Video isagoo la raaxeeysanaayo Gabar Caan ah